ကျနော့်အမြင်(သီလ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Tank » ကျနော့်အမြင်(သီလ)	21
Posted by nicolus agral on Jul 14, 2016 in Think Tank | 21 comments
သီလဆိုတာ လိုက်နာရမည့် အရာတွေပါ
ဒါနနဲ့ကွာတာက ဒါနကလုပ်ရင် ကုသိုလ်ရမယ် မလုပ်ရင်မရဘူး
သီလက လိုက်နာရင် ကုသိုလ်ရမယ် မလိုက်နာရင် အကုသိုလ်ပါဖြစ်စေမယ်ပေါ့ဗျာ
(သဂျီးကတော့ ပြောပါလိမ့်မယ် သီလကို ငရဲနဲ့ခြောက် ဒါနကို ဘုံနဲ့မြှောက်ဆိုပီး)
ကျနော့်အမြင်တော့ သီလဆိုတာ ကိုယ်ခြင်းသာတရားပဲ
ကိုယ့်ကိုသူများကလုပ်တာ မကြိုက်တဲ့ကိစ္စကို ကိုကလည်းသူများကိုမလုပ်ရဘူး
သီလမှာ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ငါးပါးသီလပေါ့
သက်ရှိဖြစ်ရမည်။ သက်ရှိဟုသိရမည်။ သတ်လိုစိတ်ရှိရမည်။ သတ်ဖို့ ကြိုးစားအားထုပ်မှုရှိရမည်။ သေဆုံးရမည်။
ဆိုတော့ ကျိုးပေါက်ဖို့ မလွယ်ဘူးပဲ သူများဥစ္စာ မပေးပဲမယူရ
ရှင်းပါတယ် မပေးပဲ မယူရပေါ့
ဥပမာ ဦးစိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က အာနာရှိသူ
ဦးဘရဲ့လယ်ကို အဲဒီတုံးက ဦးစိန်ကသိမ်းလိုက်တယ် (ဦးစိန် သူခိုးဖြစ်သလား)
အဲ ခုလက်ရှိမှာတော့ ဦးထွန်းက အာနာရှိလာတယ်
ဦးထွန်းက ဦးဘဆီက ဦးစိန် သိမ်ထားတဲ့လယ်ကို ဦးစိန်ဆီကပြန်သိမ်းတယ်
ပြီးတော့ ဦးဘကိုပြန်ပေးခဲ့ရင် ဦးထွန်း သူခိုးဖြစ်သလား
နောက် ဦးဘမရှိ ဆက်ခံသူလဲမရှိတော့လို့ ရွာအတွက် သုံးလိုက်ရင်ရော ဦးထွန်းသူခိူးဖြစ်သလား
မူးရစ်စေတတ်သော အရာအားလုံး အကြုံးဝင်သလား
မှီဝဲရုံတင်လား မူးယစ်မှလား (နဲနဲသောက် မမူးတာလဲရှိသေး)
လင်ရှိမယားနဲ့ ဖောက်ပြန်ရင် ဖောက်ပြန်တဲ့ ယောကျာ်းမှာအပြစ်ရှိတယ် အဲမိန်းမကရော ကာမေသုမြောက်လား
မယားရှိလင်နဲ့ စမောဆွဲရင်ရော ဖောက်ပြန်သူတွေမှာ ကာမေသုက ဘယ်လိုလဲ
Living together ကဘာကံမြောက်လဲ
living together ပြီးနောက်ပိုင်း ယူဖြစ်ခဲ့ရင်ကော ဘယ်လိုလဲဗျ
စဆရ ကြီး says: ကိုယ့်ဆရာက မိုးပြာကိစ္စနဲ့ ၀ိုင်းကျဉ်လိုက်ကြခံရသူလားမသိဗျာ
nicolus agral says: မိုးမပြာရပါဘူးဗျာ
ကျနော်က ကိုယ့်ဟာကို ဘာခေါင်းစဉ်တပ်ရမလဲသိသေးဘူး
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကျုပ်ထက်တော်တဲ့လူတွေလာဖြေပါလိမ့်မယ်နော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်ကတော့ အဖြူရောင်မုသားဟာ အပြစ်မရှိဘူးထင်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်သွားမယ်ဆို အဲ့ဒါဟာ ရှောင်သင့်တဲ့အရာ သီလပါပဲ။ ဘယ်သူမှ မထိခိုက်ဘူး အကျိုးရှိစေတယ်ဆို အဲသည်အရာဟာ မုသားဆိုလည်း အဖြူရောင်မုသားလို့ သုံးလို့ရတယ် အရာပေါ့။
kai says: ပထမဆုံးသိထားရမှာက.. ငါးပါးသီလဆိုတာ.. ဂေါတမဗုဒ္ဓဟော မဟုတ်ဖူးဆိုတာပဲ..။
အဲဒါက.. ဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းက.. ရှိပြီးသား…
လူက.. နေမကောင်းဖျားနာလို့.. အင်တိုင်ဘိုင်အိုးတစ်သောက်ရမယ်လို့.. ဆရာဝန်က ညွှန်းတယ်ဆိုပါတော့..
ဆိုတာ အကုန်လုပ်ရမယ်..။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ ၃ပါးလုံးနဲ့လုပ်ရမယ်..။
မြန်မာပြည်မယ်… အင်တိုင်ဘိုင်အိုးတစ်မသောက်ပဲ.. အသေခံသွားမယ်ဆိုတဲ့.. ဆတော်ကြီးတွေရှိတေယ်လို့တော့ မကြားမိ…။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဆရာတော်နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး . . . ခြေထောက်မှာ အနာဖြစ်ပြီး ပိုးတွေတက်နေတာ . . . အဲဒါကို ဖယ်ပြီး ဆေးထည့်ဖို့ကို သူတစ်ပါးအိမ်ယာကို မဖျက်စီးပါနဲ့ဆိုပြီး ဒီအတိုင်း ပျံလွန်တော်မူသွားတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်
nicolus agral says: bacteria က prokaryote ပါ
plant ထက်ကို အဆင့်နိမ့်ပါတယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမှန်တိုင်းပြောရင် စိတ်ထဲမယ် ငရဲဆိုတာ စာတွေထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း အိုးကြီးတွေ မီးပုံတွေနဲ့ ငရဲသားတွေနဲ့ လို့ မယုံမိဘူး . . . မမြင်နိုင်တဲ့ သတ္တဝါတွေ . . .ရေနွေးနဲ့လောင်းမိတယ် . . . ခြတွေကို ဆေးဖြန်းပြီး သတ်တယ် . . . ကဏန်းကို အရှင်လတ်လတ် ရေနွေးပူထဲ ထည့်တယ် . . ဒါတွေကလည်း ငရဲပဲ ဖြစ်မှာပဲ . . . သေသွားလိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ခံလိုက် နဲ့ သံသရာလည်နေမှာ . . .
kai says: ငရဲဆိုတာ…
အဲဒီအကောင်တွေအဲလိုဖြစ်နေ(မလား/တယ်)ဆိုပြီး.. ကိုယ်က၀င်ခံစားတွေနေတာကမှ.. ငရဲအစစ်..၊
Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ဂျစ်စူ says: နင့်ဘက်ကမြင် လက်ဖဝါး
မြင်ချင်သလိုမြင် ပေရော့ ဒဂါရေ
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် သောက်ကြသည်ပေါ့
ဦးဦးပါလေရာ says: အပေါ်က သူကြီးဆွေးနွေးချက်ကို အရင်ဖြည်မယ်..
(ရူပ အရူပ ဗြဟ္မာမှအပ)
ရုပ်ခန္ဓာ တစ်ပါးနဲ့ နာမ်ခန္ဓာလေးပါး စုစုပေါင်းခန္ဓာငါးပါး ရှိရပါတယ်
စုစုပေါင်းခန္ဓာငါးပါး ရှိတဲ့အကောင်ကိုသတ်မှ ပါဏာတိပါတကံ ထိုက်ပါတယ်
ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယား၊ နဲ့တကွ နာမ်မပါပဲ မွေးနိုင်သေနိုင်ပွားများနိုင်တဲ့အရာတွေဟာ သတ္တ၀ါမဟုတ်ပါ..
kai says: ခန္ဓာ ငါး ပါးမှာ (၁) ရူပက္ခန္ဓာ
ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယား တွေနာမ်မပါဘူးလို့… ယူဆတယ်ပေါ့..။
ဆိုတော့.. သံကောင်၊ လောက်ကောင်.. ခြင်ကောင်.. ယင်ကောင်တွေရော..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: သီလဆိုတာ ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ ပြုတဲ့ ကောင်းမှု့
တနည်းအားဖြင့် ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ ကောင်းတာလုပ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။
(ဒါနဟာ တနည်းအားဖြင့် သီလအတွင်းဝင်ပါတယ်)
(ကောင်းမှု့ကို)လုပ်ဆောင်တဲ့ စာရိတ္တသီလ နဲ့
(မကောင်းမှု့ကို) ရှောင်ကျဉ်တဲ့ ၀ါရိတ္တသီလ ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်
လက်ရှိလူတွေအသိများတာက ငါးပါး ရှစ်ပါး ဆယ်ပါး စသည့် ရှောင်သီလ ကိုသာ သီလအဖြစ်အသိများတာဖြစ်တယ်။
အမှန်စစ်စစ် ကောင်းမှု့မကောင်းမှု့ဆိုတာကို သီလနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ
ဒုစရိုက် သုစရိုက် နဲ့သာဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။
သီလဆိုတာ တကယ်တော့ သမုတိသဘောနဲ့ ပညတ်ပြီးစည်းတားတာပါ
လွယ်လွယ်ဥပမာအားဖြင့် သီလဆိုတာ လူတွေ ပညတ်တဲ့ ဥပဒေ ဆိုတာနဲ့ တူပါတယ်။
ဥပမာ – အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံမှာ မယားလေးယောက်ယူလို့ ဥပဒေနဲ့ညီပါတယ်..
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မယားတစ်ယောက်ထက်ပိုယူရင် ရိပ်သာဝင်ရပါတယ်..
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒါကြောင့် –
လူကို မျက်စေ့ဖေါက် ခြေလက်ရိုက်ချိုး မသေရုံညှင်းပမ်းရင် ပါဏာတိပါတကံ လုံးဝ လုံးဝ မထိုက်ပါ။
မထိုက်ပေမယ့် အလွန်အကုသိုလ်ကြီးတဲ့ မကောင်းမှု့အကြီးစား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဒုစရိုက်နဲ့သီလကို ခွဲပြတဲ့ဥပမာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဦးပါလေရာ says: ငါးပါးသီလကိုပဲ ပြောရရင်
အဲသည် သူ့အသက်သတ် သူ့ဥစ္စာခိုး သူ့အိမ်ထောင်မှား လိမ်ပြော မူးယစ် ဆိုတဲ့
သူ့အသက် ၊ သူ့ဥစ္စာ ၊ သူ့အိမ်ထောင် ၊ လိမ်ခြင်း ၊ မူးယစ်စရာပစ္စည်း … ဆိုတဲ့ ငါးမျိုးဟာ
ကာလ ဒေသ ပယောဂ အလိုက် သူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်
သမုတိ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေမယူရပါ..။
kai says: ဒါလေးဖွင့်ပြတာကို ကျေးဇူးတင်…။
မနေ့ကတင်.. ခရီးသွားရာက ပြန်လာတယ်..။
ခရီးသွားရာမှာ… အမေရိကပြည်နယ်တခုဖြစ်တဲ့.. ကိုလိုရာဒိုပြည်ကို ဖြတ်ခဲ့တယ်..။
အဲဒီမှာ.. ကိုလိုရာဒိုပြန်အဖြစ်.. အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးလို့ရအောင်.. ဆေးခြောက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သကြားလုံးဝယ်တယ်..။
ကိုလိုရာဒိုကနေ.. ကယ်လီဖိုးနီးယားမပြောနဲ့.. အနားကကပ်ရက်ပြည်နယ်.. ၀ါယိုးမီပြည်ကို သယ်လို့မရ..၊
မိရင်.. ဥပဒေအရ.. မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့..။
အဲဒါနဲ့.. ကိုလိုရာဒိုပြည်၊ ဒန်ဗာမြို့ဟော်တယ်အထွက်က.. အဖြူမတယောက်ကို.. လက်ဆောင်ပေးခဲ့ရ..။
ဦးဦးပါလေရာ says: ((((သားပျိုသမီးပျို
living together ပြီးနောက်ပိုင်း ယူဖြစ်ခဲ့ရင်ကော)))))
သားပျိုသမီးပျိုဆိုတာ အရင်ခေတ်က မိဘအုပ်ထိန်းမှု အဆွေအမျိုးအုပ်ထိန်းမှု အရပ်အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာရှိပါတယ်
အရင်ခေတ်ကဆို သူများသားပျိုသမီးပျို နဲ့ မှားရင် သံဝါသပြုရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ပါတယ်..
ဒီခေတ်မှာ သားပျိုသမီးပျိုတွေကို ဥပဒေအရ ဘယ်သူမှမအုပ်ထိန်းပါ ။ သူ့ဖါသာပဲ အုပ်ထိန်းပါတယ်..
ဒါကြောင့် ဒီခေတ်မှာ သူများသားပျိုသမီးပျို နဲ့ မှားရင် သံဝါသပြုရင် ဘာကံမှမထိုက်ပါ
လစ်ဗင်းတူဂဲသား ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကသာလက်ခံရင်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ နဲနဲလေး စောနေသေးလားလို့…
kai says: လူက အရွယ်ရောက်လာရင်.. (တချို့အရွယ်တောင် မရောက်သေး)…
ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်.. ချစ်သူ.. ခင်သူ.ကောင်လေး.. ကောင်မလေး.. ဂေးတွေကို.. စိတ်ဝင်စားတယ်..။
စိတ်ဝင်စားပြီး.. စိတ်(မနောကံ) နဲ့ ..ပုံဖေါ်ကြည့်ပြီး.. အကြိမ်ကြိမ်.. သံဝါသပြုတယ်..။
ဒီလိုကြောင့် ..မျိုးပွားအားကောင်းတဲ့…လူသားဆိုတာ.. ဒီကမ္ဘာမြေမှာ.. အတိုးတက်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာ..၊
ဒါကို.. သီလခေါင်းစဉ်တတ်ပြီး ပိတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်..။
“မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ” နဲ့.. ဦးပါကို.. ထောက်ခံ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: မေ့လို့ ……
ကံထိုက်တာတိုင်းဟာ မုချဒုစရိုက်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး..
ကံထိုက်တာတိုင်းဟာ အပါယ်ငရဲနဲ့လဲ တိုက်ရိုက် မဆက်စပ်ပါဘူး..
ကံထိုက်တာတိုင်းဟာ အကုသိုလ်တော့ ဖြစ်ပါတယ်..။
တရားတွေထဲမှာဖြင့် ပဌာန်းတရားတော်ကြီးဟာ အတော် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်..
တချို့ကတော့ အဲဒါ ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်..
မြစပဲရိုး says: Living together က တစ်ခြား အနောက်တိုင်း မှာ ဘာမှ အပြစ်မမြောက်ပါ။
Living together ဆိုတာ ဟာ အရွယ်ရောက်ပြီး လွတ်လပ်သူ နှစ်ဦး သူတို့ ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒဖြင့် မည်သူ့ ခွင့်ပြုချက်မှ မယူဘဲ သီးခြား အိုးအိမ်ခွဲ နေထိုင်ခြင်း ကို ဆိုလိုပါသည်။
ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု များနှင့် မဆိုင်သော အပြန်အလှန် တာဝန်ခံမှု ရှိသည့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှု ဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်သွား တစ်ညအိပ်ရုံ ကို Living together မခေါ်ပါ။
Living together နေနိုင်ရန်
ကာမပိုင် မရှိ လွတ်လပ်သူ ဖြစ်ရမည်။ (မဟုတ်ပါက လင်ခိုး/မယားခိုး မှု ပြစ်ဒါဏ် ခံရမည်)
၁၈ နှစ် အသက်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရမည်။ (မဟုတ်ပါက ကလေးခိုး မှု ပြစ်ဒါဏ် ခံရမည်)
ထို့ကြောင့် ဘာသာရေး အရ လဲ ဖောက်ပြား ခြင်း ဟု မခေါ်နိုင်ပါ။
ဒီလို အနောက်တိုင်းများမှာ က Living together မပြောနှင့်။ တစ်ညအိပ်မိပြီး ကိုယ်ဝန်ရသွားရင်လဲ အဖေ အမည်ခံ ဖို့ ဝန်မလေးကြ။
ကလေးစရိတ် ထောက်နိုင်ရင် ထောက်။ မထောက်နိုင်လဲ အစိုးရ ဆီက ကလေးစရိတ် ရ တော့ ကလေး မှာ ငတ် စရာ အကြောင်းမရှိ။
အဲဒါမျိုး ကို ကိုယ့်ရွှေပြည်မှာ အတုခိုး ကြလေတော့။
ဗိုက်ထွက်လာတော့ တာဝန်မခံလိုသည့် မင်းယောကျာင်္းများ ရဲ့ ငြင်းဆန်မှု အပြီး ကိုယ့်သွေး ကို စွန့်ပြစ်မှု ၊ တာဝန် မယူနိုင်မှု တွေ နဲ့ အင်မတန် အကျည်းတန် ရုပ်ဆိုးလွန်းတဲ့ လူမှုဘဝ တွေ အပြည့်။
မိဘမဲ့ ကလေး တွေ များများလာတာ မြင်ရအာ စိတ်မချမ်းသာစရာ။
အခြေအနေ မတူတာ ကို သတိပြုပြီးမှ သူများ ယဉ်ကျေးမှု ကို ယူသင့်/မသင့် စဉ်းစားကြပါကုန်။
ဒီတော့ ဘာသာရေး အရ နံရံတစ်ဖက်မှာ ငရဲကျ မကျ တော့ မသိ။
လက်ရှိ ဘဝ မှာတော့ တာဝန်မခံ မှု တွေ နဲ့ အပြစ်မဲ့ ကလေး တွေအများအပြား လူ့ ငရဲ ခံ နေရ တာ တွေ ကတော့ မျက်မြင်ဘဲ။
မမချွိ says: ခညာ့
ကိုယ်ချင်းစာ တရားသာရှိ ဘာသီလ မှ ဇွတ် စောင့်ထိန်းခိုင်းစရာမလိုဘူးထင်တာပဲ။